Iaraha-mahalala, hoy izy, fa ny Artemisinine no mameno ny ampahany betsaka ao anatin’izy io, izay azo avy amin’ny zava-maniry hoe Artemesia anoa. Amin’ny maha dokotera ny tena, izany hoe siantifika, dia tsy maintsy mihevitra foana ny atao hoe “rigueur scientifique” saingy ao anaty fahamehana anefa isika ka noho izany dia tsy hoe tsy arahana io fenitra io fa mila iviliana raha maro ny aina mila vonjena. Ohatra, raha mahita olona sempotra ianao dia mahafantatra tsara fa eo amin’ny faritry ny tenda eo misy faritra azo tsindromina mety hanavotra ilay olona sempotra kanefa ny mpitsabo dia mahalala fa tsy ataotao foana io ka, noho izany, ny mpitsabo no tokony ho tomponandraikitra amin’ny fanatontosana izany. Hatreto dia ny fitondram-panjakana sy ireo mpitsabon’ny IMRA ihany, hoy izy, no mahalala ny tsiambaratelon’ny CVO. Isan’ny heverina ho mety ho fivoaran’ilay fikarohana nolazaiko ny nahitana ny CVO manasitrana taorian’ny CVO fisorohana. Ny azo antoka dia ny hoe ireo kasinga miisa 2 hafa ankoatran’ilay Artemesinine dia na kasinga mampaharitra ny fiasan’io Artemisinine io na mampitombo ny fomba fiasany. Noho izany dia tokony hisy dokotera manokana misahana ny fanaraha-maso ny fiasan’io CVO io mba hirosoana hatrany amin’ny fikarohana momba azy, hoy hatrany ity dokotera ity.